यमनका प्रधानमन्त्री लक्षित बम विष्फोट, २२ जनाको निधन | Himal Times
Home Flash News यमनका प्रधानमन्त्री लक्षित बम विष्फोट, २२ जनाको निधन
ऐजेन्सी । यमनको दक्षिणी शहर अदनको विमानस्थलमा भयानक विष्फोट हुँदा कम्तिमा २२ जनाको मृत्यु भएको छ । ५० जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सुरक्षा अधिकारीहरुका अनुसार नयाँ सरकारका सदस्यहरुलाई लिएर छिमेकी देश साउदी अरबबाट एक विमान एयरपोर्टमा ओर्लिनासाथ विष्फोट भएको थियो ।
‘अदन विमानस्थल’मा बुधवार ठूलो बिष्फोट भएको छ । बिष्फोट यमनको नयाँ क्याबिनेटका मन्त्रीहरु सवार विमान अवतरण भए लगत्तै भएको थियो । त्यस क्रममा ब्यापक फायरिङको पनि आवाज आएको थियो । विमानमा यमनका प्रधानमन्त्री मीन अब्दुल मलिक सइद आफ्नो कैबिनेट टोलीका साथ थिए ।
बिष्फोटमा परेर अहिलेसम्म २२ जनाको मृत्यु भएको खबर छ । रिपोर्टका अनुसार, विमानमा सवार कुनै पनि मन्त्रीहरु हताहत भएका छैनन, सबैजना सुरक्षित छन् । विमानमा कतिजना मन्त्रीहरु थिए भन्ने जानकारी भने सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
साऊदी मेडियाका अनुसार, प्रधानमन्त्री सहित विमानमा सवार सबै मन्त्रीहरुलाई सुरक्षित राष्ट्रपति भवन पुर्र्याई सकिएको छ । यमनका सूचना मन्त्री मोमार अल इरयानीले हमलाको पछाडी हूथी विद्रोहिहरुको संलग्नता हुनसक्ने आशंका जनाएका छन् ।
Previous articleगर्भावस्थामा पायल्स भए के गर्ने ? कसरी बच्ने त ?
Next article१० औँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता कर्णालीमा गर्छौं : मन्त्री रावल
काेराेना प्रभाव : प्रचण्डले भेटघाट नगर्ने
Himaltimes - March 19, 2020
विवाहको वहाना गरी जबरजस्ती करणी तथा ठगी गर्ने राजन विश्वकर्मा पक्राउ
ओलीद्धारा ११९९ सदस्यीय केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा